Dawlada Uganda Oo Markii Ugu Horasay Qiratay In Ay Kagamaqanyihiin Ciidamo Dagaalkii Janaale Kadhacay – STAR FM SOMALIA
Markii ugu horeysay Dowladda Uganda, waxa ay qiratay inay Askar ku la’dahay weerarkii 1-dii Bishan ciidamada Shabaab ay ku qaadeen Degmada Janaale ee Gobolka Shabeellaha hoose, Saldhig ciidamada Amisom ay ku leeyihiin Degmadaasi.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo isaga ku sugan Magaalada Tokyo ee dalka Japan Saxaafadda la hadlay, wuxuu qirtay weerarkii Janaale in looga dilay 19 Askari, ayna ku la’yihiin Askar gaareysa lix Askari.
Yoweri Museveni, wuxuu sheegay weerarkaasi inuu sahlay qalad ay sameeyeen Saraakiisha Amisom ee ku sugnaa Saldhiga, kadib markii sida uu yiri ay iska seexdeen, iyaga oo ciidamada aysan siinin digniin ku aadan suurtagalnimada weerar kaga yimaada Shabaab.
Hogaamiyaha dalka Uganda, ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in shaqada laga fariisiyay Saraakiishii ciidanka Degmada Janaale ee dalka Uganda u dhashay, wuxuuna sheegay inay wajahayaan maxkamad si loogu qaado qaladka ay sameeyeen.
Al Shabaab ayaa sheegay inay hayaan maxaabiis u dhashay dalka Uganda oo ka mid ahaa ciidankii Amisom ee Degmada Janaale ku sugnaa, balse ma aysan sheegin tirada ciidamada maxaabiis ahaanta ay u haystaan Shabaabka.
Hadalka Madaxweynaha dalka Uganda kasoo baxay, wuxuu meesha ka saarayaa hadal horay uga soo baxay Afhayeenka Wasaarada Difaaca dalka Uganda Paddy Akunda uu ku sheegay weerarkii Shabaab ay ka geysteen Janaale inaysan ku qabsan ciidan Uganda u dhashay.
Shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi inay ku dileen in ka badan 50 Askari oo Ugandhees ah, balse Madaxweynaha dalka Uganda ayaa qirtay inay ka dhinteen kaliya 19 Askari.